काठमाडौं  । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सकिन नपाउँदै तेस्रोको जोखिम उच्च देखिएको छ। डेल्टा भाइरस र यसको उत्परिवर्तित रूप डेल्टा प्लसको संक्रमण अब धेरै टाढा छैन।
नेपालमा डेल्टार डेल्टा प्लससहित अन्य दुईवटा भाइरसको संक्रमण पाइएको छ। गत वैशाख २६ देखि जेठ २० गतेसम्म मुलुकका विभिन्न भागमा विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरूबाट ४८ वटा नमुना संकलित गरिएको थियो। संकलित नमुनाहरूको जिनोमिक पहिचान (सिक्वेन्सिङ) गर्दा अधिकांशमा डेल्टा भेरियन्ट पुष्टि भएको थियो। संकलित ४८ वटा नमुनाहरूको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा छनौट गरी जिनोम सिक्वेन्सिङका लागि भारत पठाइएको थियो। जसमध्ये ४७ वटा नमुनामा डेल्टा भेरियन्ट पुष्टि भएको छ। एउटा नमुनामा अल्फा भेरियन्ट (बी.१.१.७) पुष्टि भएको डा. अधिकारीले जानकारी दिए। डेल्टा भेरियन्ट पुष्टि भएका ४७ वटा नमुनामध्ये ९ वटामा थप उत्परिवर्तन (के ४१७एन म्युटेसन) भेटिएको छ। यसलाई एवाई १ नामाकरण गरिएको छ।
डेल्टाको उद्गम मुलुक भारत हो। गत वर्ष पुसमा यो भेरियन्टको पहिचान भएको थियो। त्यस्तै डेल्टा प्लस भेरियन्टको गत वर्ष चैतमा युरोपमा पहिचान भएको थियो। दोस्रो लहरमा व्यापक संक्रमण गराउनमा डेल्टा भाइरस जिम्मेवार रहेको विज्ञहरूको अनुमान छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, उपचारात्मक सेवा महाशाखाका वरिष्ठ कन्सल्ट्याण्ट डा. प्रकाश बुढाथोकी पनि संक्रमण फैलने जोखिम रहेको औल्याउँछन्। ‘स्मार्ट लक डाउन भन्दै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ। घरभित्र थुनिएका व्यक्तिहरू काममा दौडिनु स्वाभाविक हो,’ डा.बुढाथोकीले भने, ‘विश्वभरि नै खोपको अभाव छ। सरकारले लक्षित जनसंख्यालाई खोप लगाउन चाहेर पनि सकिएको छैन। केही महिनामै संक्रमण बढ्ने डर कायम नै छ।’ खोप पनि नपाएको र जनस्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने तदारुकता पनि नदेखिएको उनले बताए।
कोरोना भाइरसका मुख्य १२ प्रजातिमध्ये सबैभन्दा बढी संक्रामक डेल्टा भेरियन्ट र यसको उत्परिवर्ति रूप डेल्टा प्लस भएको पाइएको छ। यो बढी संक्रामक रहेको र फोक्सोको कोषिकामा संक्रमण गराउने जनाइएको छ।
ल्यान्सेट जर्नलमा प्रकाशित एक विवरणअनुसार, अल्फा भेरियन्टभन्दा डेल्टाबाट संक्रमितको अस्पताल भर्ना हुने दर दोब्बर छ। यसले सबै उमेर समूहका महिला÷पुरुषलाई संक्रमण गराउने विभिन्न अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरमा अल्फा भेरियन्टको संक्रमण बढी थियो। दोस्रो लहरमा डेल्टा, कप्पार डेल्टा प्लस भेरियन्टले संक्रमणलाई व्यापक पाइएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेल डेल्टा भाइरस यसको उत्परिवर्तित रूपका रुपमा रहेको डेल्टा प्लस बढी संक्रामक रहेको बताउँछन्।
आइतबार मुलुकभर १ हजार ९ सय २० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले पनि कति संक्रमितमा डेल्टा र डेल्टा प्लस देखिएको हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। नेपालमा अल्फा बाहेक अन्य भेरियन्ट पहिचान गर्न सक्दैन।
संभावित संक्रमितले समयमै परीक्षण गर्न नसक्दा संक्रमण बढिरहेको बताउँछन्। ‘कोरोना भाइरसको लक्षण भएका सबै व्यक्तिको निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। समयमै परीक्षण गराए संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सहयोग पुग्थ्यो,’ उनले भने।
उपचारात्मक शाखा काडा बुढाथोकीका अनुसार कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरमा बालबालिका जोखिममा पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।
कोरोना संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा ज्येष्ठ एवं वयस्कहरू बढी संक्रमित भएका थिए। ‘कोरोना भाइरस संक्रमणलाई परास्त गर्न सफल व्यक्तिहरूमा एन्टिबडी बनिसकेको छ। यहीँ उमेर समूहका व्यक्तिहरू प्राथमिकतामा परेर खोपसमेत लगाइसकेका छन्।’ डा. बुढाथोकीले भने, ‘त्यसैले तेस्रो लहरमा बालबालिका संक्रमित हुन सक्ने संभावना रह्यो। बालबालिकाले खोप पनि लगाउन पाएका छैनन्। जनस्वास्थ्यका मापदण्डसमेत पालना नगर्ने हुनाले बालबालिका बढी जोखिममा छन्।’
मुलुकमा केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा एउटा मात्र कान्ति बाल अस्पताल छ। डा. बुढाथोकीका अनुसार, बालबालिका संक्रमित भए कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनी गाइडलाइन बनाउन लागिएको छ। ‘गाइडलाइन बनाउने क्रमसँगै कुन कुन औषधि सिफारिस गर्न मिल्ने, कुन सरसामग्री आवश्यक पर्ला भनेर सूची तयार गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने। स्वदेशमै सामग्री उपलब्ध हुन नसकेमा बाहिरि मुलुकबाट खरिद गरेर ल्याइने डा. बुढाथोकीले बताए।
नेपालमा बाल रोग विशेषज्ञको संख्या झण्डै २ सय छ। बालरोग विशेषज्ञहरू ठूला सहरहरूमा सीमित छन्। मुलुकभरिका अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीलगायत सरकारी संस्था र निजी एवं सामुदायिक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने कार्यसमेत सञ्चालन गरिएको डा. बुढाथोकीले जानकारी दिए।
‘होम आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा कसरी परामर्श दिने भन्ने विषयमा पनि ओरियन्टेशन दिँदै छौं,’ उनले भने।